NDI GOOMENTI NA-ATU EGWU INWETA EGO IKWU UGWO MMANU SITE N'AKA NNPC
Home AKUKO UWA Akuko Ala Anyi NDI GOOMENTI NA-ATU EGWU INWETA EGO IKWU UGWO MMANU SITE N’AKA NNPC
NDI GOOMENTI NA-ATU EGWU INWETA EGO IKWU UGWO MMANU SITE N’AKA NNPC
National Economic Council (NEC), gụnyere ndi ọchịchị 36 na mba ahụ egwu egwu na ha ga-eburu ibu ọrụ nke ịkwado ngwaahịa mmanụ ala ha na-adabere na oriri na-esote nnukwu ego nke NNPC na-eji na-akwụ ụgwọ ọrụ mmanu kwa afọ.
Onye isi oche nke ndị gọọmentị, Gov. Abdulazeez Yari nke Zamfara kwuru nke a mgbe ọ na-aza ajụjụ mgbe nzukọ NEC gasịrị, nke onye isi oche Yemi Osinbajo na-eduzi na steeti onyeisi oche, Abuja na Thursday, kwuru na gọọmenti ga-eme ọnwa ọzọ ( June) kpebie ma ị ga-eburu ọrụ maka enyemaka na ọnọdụ ha ma ọ bụ.
KAMRA ONYE ISI DANGOTE CEMENT NKE INDIA
O kwuru na NNPC ji N800billion akwụ ụgwọ dị ka onyinye, na-ekwu na NEC ga-ekpebi ma ọ ga-ekwe ka NNPC nọgide na ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ.
“Nsogbu anyị bụ olu, ọnụ ọgụgụ nke oriri nke anaghị anabata.
“Iso ndi gọọmenti na-emekọrịta ọtụtụ mkpebi ka ọnwa iri na-abịa, anyị ga-anakwere ọkwá ahụ maka gọọmentị iji were ọrụ maka enyemaka na steeti ha dabere na oriri ma ọ bụ anyị na-ele ụzọ ndị ọzọ.
“Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na i kwuo na anyị kwụrụ ụgwọ ego N800, ị ga – ajụ ndị anyị na – akwụ ụgwọ ego ahụ? Ma ọ bụrụ na ị lelee mmepe akụrụngwa na isi obodo nke Federal Government, ọ bụ ihe dị ka nde mmadụ iri abụọ na ise, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 70 nke ihe ị na-eme iji mepụta akụ na ụba.
“Ọ bụrụ na enweghi mmepụta ngwá ọrụ, ị gaghị enwe ike ikwu maka mmepe nke aku na uba. N800 ijeri bụ nnukwu ego nke anyị ga-ele anya na ya, onye na-erite uru na ya.
“Ya mere, anyị na-agbaso atụmatụ, anyị ga-ezukọ na ọnwa Mee na June. Site na nzute ọzọ, anyị ga-ebute ọnọdụ nke gọọmentị na ọkwa abụọ nke ihe a na-ebute ná mba ahụ na ihe steeti na Federal Government jikọrọ iji chọpụta, ‘”ka o kwuru.
Gọọmenti ahụ gosiri na Minista State maka Industry, Trade and Investment kwuru na NEC nwere ike ịmepụta Ụlọ Akwụkwọ Advisory Council nke Naijiria nke ụlọ ọrụ Federal Executive (FEC) kwadoro na 2017.
“Ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ọrụ na-achọpụta na ọ dị mkpa maka mmekọrita n’etiti Federal Government (FG), Gọọmenti na Obodo Gọọmentị iji kpochapụ ihe omume mmepụta ihe.
“Nkọwa okwu taa bụ ịmepụta atụmatụ asatọ na aro ndị sitere na Kọmitii Ọrụ na-achọ ka ndị ọchịchị gọọmentị na-enyere aka, ‘” ka ọ gbakwunyere.
Yari kwuru na Council Advisory rịọrọ NEC ka ọ kwadoro atụmatụ ndi ahụ iji mee ka ọkpụkpụ a mara iji kpochapụ ihe omume Industrialization.
Ma, o kwuru na Kansụl na-anabata ekpere ahụ kpebiri na Nigeria Communication Commission kwesịrị ịga ma depụta atụmatụ ya ma gwa ndị gọọmentị gọọmenti okwu na nzukọ ọzọ.
« KAMRA ONYE ISI DANGOTE CEMENT NKE INDIA » NDI AGHA OBI IKE NA-EBUSO ONWE HA AGHA NA ULO ALAKUBA YOBE
Previous article KAMRA ONYE ISI DANGOTE CEMENT NKE INDIA
Next article NDI AGHA OBI IKE NA-EBUSO ONWE HA AGHA NA ULO ALAKUBA YOBE